ကဗျာရေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အစဉ်မပြတ်ငါကတစ်နေရာရာကိုသင်တီးတိုးအတွင်း၌ထင်။ တခါတရံသူကချိုး, နှင့်တိတ်တဆိတ်ပြောပြသည့်အခါ။ ထို့နောက်အရာရာကိုမှန်ကန်သောဗြာဆနျဆအတိုင်းအတာထဲမှာရှုမြင်သုံးသပ်ကြသည်။ ငါကမှားပေလိမ့်မည်။ ငါကဗျာမရေးပါဘူး။
ဘယ်လိုအဘယ်သူမျှမသိတယ်ကဗျာရေးဖို့နှင့်ဖြစ်ကောင်းပင်ပါရမီကောင်းသောကဗျာရရှိရန်အထူးသဖြင့်, ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုအတိအကျရှင်းပြလို့မရပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမ, သင်တန်း, ကဗျာရေးဖို့ကဗြာဆနျပုံစံကိုဆုံးမသွန်သင်ခြင်းနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်စည်းချက်နှင့်အကျမ်းပိုဒ်အရွယ်အစားရွေးချယ်ဖို့ဆုံးမသွန်သင်ကြသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဘယ်လိုအခွက်တဆယ်ရေးသားဖို့သငျသညျသင်ပေးလို့ရပါတယ်။ အခွက်တဆယ်သို့မဟုတ်သဘောသဘာဝအပေါ်ထားကြ၏သို့မဟုတ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမခဲယဉ်းပါကအစားထိုးမရနိုငျအလုပ်လုပ်ကြသည်။
မူဆယ်ပျံသန်း, လှုံ့ဆော်မှုလာသင့်တယ်, ကဗျာစိတ်နှလုံးထဲမှာမတင်းကျပ်ရေတွက် syllables နဲ့လှပတဲ့ကဗျာကိုရွေးချယ်ရေးမှာမွေးဖွားရပါမည်။
ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းကဗျာတစ်ပုဒ်ချင်းစီကိုရေးသားနိုင်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးသည်အလွန်ကောင်းသောကဗျာဆရာနီကိုလိုင် Gumilyov စကားရေးသားသူပင်အများဆုံးသာမန်အခြိနျမှနျမှသူအခွက်တဆယ်တစ်မရှိခြင်းစဉ်းစားတော်မူသောကဗျာဆရာ၏တိုတောင်းတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်၏စံနမူနာကိုးကားပြီးရိုးရှင်းစွာတောက်ပလိုင်းမွေးဖွားခံရဖို့ဖြစ်နိုင်သည်:
ဒါဟာကဗျာတစ်ပုဒ်အဓိကအား Dolno အကျိုးစီးပွားစာဖတ်သူကို, မူရင်းနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်သင့်တယ်, စကားလုံးများနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ၏ဂုဏ်အသရေကိုထိသင့်ကြောင်းငါ့ထံသို့ပုံရသည်။ အဆိုပါကဗျာစကားပြေနှင့်ပတ်သက်ပြီးပွောနိုငျသောသူအပေါင်းတို့သည် spravdlivo များအတွက်ဆိုလိုသတည်း။
အချည်းနှီး, များစွာသောစာရေးဆရာများကဗျာကိုခြင်းမရှိဘဲ, ဒါပေမယ့် Melody အတူကျမ်းပိုဒ်ဒါခေါ်အလွတ်ကျမ်းပိုဒ်ရေးသားခဲ့သည်မဟုတ်, ကကဗျာအတွက်မွေးရာပါဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်းငါသည်မှန်ကန်စွာညွှန်ကြားချက်ကဗျာသို့မဟုတ်အရေးအသားကဗျာရေးဖို့သင်ယူဘယ်တော့မှသောထင်ပါတယ်။ အရေးအသားတစ်ခုကိုဝမ်းနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဝမျးမွောကျခွငျး၏ရလဒ်အဖြစ်ရှိလိမ့်မည်သည့်အခါက signal ကိုပေးနှင့်တစ်ဦးကလောင်အမည်ကို ယူ. ရေးသားဖို့သငျသညျအတင်း, သင်ကဗျာရေးသားခြင်းအပေါ်ညွှန်ကြားချက်စောင့်ကြည့်လျှင်သင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမယ်လို့လိမ့်မည်, လှုံ့ဆော်မှုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ထို့နောက်အဘို့အသင်အမှန်တကယ်တစ်ကဗျာဆရာ, versemonger ဖြစ်လာပါဘူး။
ပထမဦးစွာသင်ရေးလိုက်ချင်ထို့နောက်အဘယျသို့သို့မဟုတ်တော်မူသောခေါင်းစဉ်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအခါအက္ခရာအားလုံးကိုထွက်ထားကြ၏။ အဆိုပါကဗျာကိုရွေးချယ်ရေး, သင်ကြိုက်နှစ်သက်သို့မဟုတ်သင့်စဉ်းစားအဘယ်အရာကိုရေးသားခြင်း၏စတိုင်များ။
အတင်းအဖျင်း-လိမ္မာသည် ဖြစ်. လူများက
ငါကုန်းတိုက်ခြင်းနှင့်ငါကအရမ်းစိတ်ဆိုးခဲ့သောအခါဤကဗျာကို, ဝိညာဏချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့အပေါ် 17 နှစ်ပေါင်း၌ငါ့ကိုကရေးသားခဲ့သည်။ သူတစ်ဦးတည်းသာကျန်ရစ်၏။ မူဆယ်ငါ့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်လျှင်အဖြစ်အခနျးငယျအလွန်လျင်မြန်စွာလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာမူကြမ်းအဖြစ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်တည်းခိုမပေးပါ။ ဒီတော့တင်းကြပ်စွာမစီရင်။ သူတို့ကဦးခေါင်း၌, ထို့နောက်စက္ကူဖို့အကြောင်း, ပြောပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကသင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သောအရာကိုရေးပါ။ သငျသညျကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါ။
သငျသညျ, အခွက်တဆယ်သေချာများအတွက်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကအကြောင်းတွေအများကြီးရေးလိုက်ပေမယ့်ဒီနေရာမှာအားလုံးအတူတူပင်လျှင်မရနိုင်ပါ။ သငျသညျလိုင်းများအနည်းဆုံးစုံတွဲတစ်တွဲကိုရေးသားမနိုင်လျှင်, သူကကိုယျ့ကိုယျကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အလွန်ကောင်းဖြစ်သင့်သည်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်သင်ပိုမိုဖတျရှုဖို့အကြံပြုပါတယ်။ အများကြီးဖတ်ပါ, အများကြီး! ဤသူသည်သင်တို့ကိုအလွန်ကူညီပေးပါမည်သောအကောင်းဆုံးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ရုံကကြိုးစားသင်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
ကဗျာ storekeeper အပေါ်ထင်ဟပ်။
သင်တစ်ဦးအဘိဓါန် ယူ. , သင်သည်လက်ျာစကားလုံးများကိုရှာတွေ့
Posted in, အခြား
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,837 စက္ကန့်ကျော် Generate ။